Sarimihetsika : Maherin’ny 350 ireo horonantsary alefa mandritra ny RFC
11/04/2018 admintriatra 0
Miditra amin’ny andiany faha-13. Ho ambohi-pihaonan’ny mpankafy sarimihetsika indray ny etsy amin’ny Institut Français de Madagascar na ny IFM Etsy Analakely. Hanomboka ny 13 avrily izao ny hetsika, ary aharitra hatramin’ny 21 avrily. Maherin’ny 350 …Tohiny
Toliara : Sokatra “radiata” 5000 isa sarona
Sokatra « radiata géochelone » maherin’ny 5000 isa no tra-tehaka tany amin’ny kaominina Betsinjaka, distrikan’i Toliara II omaly tokony ho tamin’ny 12 roa antoandro. Lehilahy iray sy vehivavy iray ihany koa no noraisim-potsiny niaraka tamin’ireo …Tohiny
Fampiakarana saran-dalana : Manao sorona ny vahoaka indray ny mpitatitra
Ankatoky ny fifidianana isika izao, ary saika efa miantso ny fitoniana avokoa ny ankabeazan’ireo tompon’andraikitra eto amin’ ny tany ama-manonina miampy ireo eo anivon’ ny vondrona iraisam-pirenena toa ny SADC sy ny TROIKA izay efa …Tohiny
Maroantsetra : Voafehy ny aretim-pivalanana sy tazomoka
Isan’ireo faritra nitondra faisana tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Eliakim farany teo ny faritra Analanjirofo, indrindra ny distrikan’i Maroantsetra. Ity farany izay dibo-drano ary nahiana ny hampirongatra ny valanaretina. Noho ny fandraisana andraikitry ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fahasalamana …Tohiny
Omaly no niakatra fitsarana teny amin’ny tribonaly “administrative” ny fitoriana ny kaominina Antananarivo renivohitra nataon’ireo mpanolotsaina mpanohitra ao amin’ny fitantanana ny kaominina mahakasika ny tany eny Andohatapenaka. Antony fitoriana ny fampifangaroana ny raharahan’ i orinasa ...Tohiny
Fanatsarana an’Antananarivo : 28 tapitrisa Euros avy amin’ny AFD sy ny UE